Soo dejisan iSpy 6.5.8 – Vessoft
Soo dejisan iSpy
iSpy – software ah oo loogu talagalay ilaalada video deegaanka centrain ah. software The u saamaxaaya in ay isticmaalaan tiro badan oo ka mid ah mikroofanada iyo IP ama USB kamaradaha caadiga ah. iSpy ku jira server ka dhisay-in web kaas oo kuu ogolaanaya in aad si ay u dhawraan dhulka ee waqtiga dhabta ah. software wuxuu u soo dirayaa warbixinta oo ka mid ah dhaq-duubay ama dhawaaq si user by e-mail ama telefoon. iSpy kuu ogolaanaya in aad rights reserved Warega si toos ah on ama dami ah ogaanshaha record, bedka mooshin Webcama iyo dareen makarafoonka for ogaanshaha ee codadka adaanaha qolka ka. Sidoo kale software ku dari kartaa kombiyuutarada badan galay koox bixiya gacanta ah ee maamulka web by isticmaaleysaa fog.
La shaqee tiro aan xad lahayn oo ka mid ah kamaradaha iyo mikroofanada
Kormeerka ee waqtiga dhabta ah
Wararka xadgudub territory ee shayga ay gacanta ku
Galitaanka mid ah waxyaabaha la duubay
Dad badan oo qalab si astaysto
iSpy Software la xiriira:
Sandboxie 4.2 iyo 5.07 beta
العربية, English, Українська, Français... Yaware.TimeTracker 1.4.12.387